यी महिलाको आँखाबाट आँशु हैन बग्छ र गत, यस्तो छ का रण ! « गोर्खाली खबर डटकम
यी महिलाको आँखाबाट आँशु हैन बग्छ र गत, यस्तो छ का रण !
२०७७ माघ २५ गते आइतवार प्रकाशित
रातमा रगतको आँशु चुहाउने भनेपछि कुनै भुतकथाको सम्झना आउँछ । तर एकजना महिलाको हकमा भने यो कुनै कथा होइन, जीवनको दुखद यथार्थ बनिरहेको छ । ती महिलाले रातको दुई बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म रगतको आँशु चुहाउँछिन् ।
हवाई न्यूज नाउका अनुसार सुरुवातमा यी महिलाको हात तथा खुट्टामा रातो धब्बा आएका थिए । त्यसपछि उनका जोर्नीहरु दुख्न थाले । केही दिनपछि उनको ओठ फुटेर रगत बग्न थाल्यो । समस्या बढ्दै गयो र अन्ततः उनको आँखाबाटै रगत बग्न थालेको छ ।
लिनीकी आमा रातमा उनीसँगै सुत्ने गर्छिन् । कतै उनको आँखाबाट रगतका आँशु बगेका छन् कि छैनन् भनेर बारम्बार हेर्ने गर्छिन् ।अमेरिकाको हवाईमा बस्ने यी महिलाको नाम लिनी इकेदा हो । उनले झण्डै ३० जना डाक्टरलार्य उपचार गराइसकेकी छिन् तर समस्या कम भएको छैन । उनको रोगलाई गार्डनर डायमन्ड सिन्ड्रोम भनिन्छ ।
परिवारले साथ दिँदा आफ्नो आत्मविश्वास बढेको उनी बताउँछिन् । आँखाबाट रगत बग्दा आफुलाई दुखाइ महसुस नहुने भएपनि आँखा सुन्निने र केही जलन महसुस हुने लिनी बताउँछिन् । एजेन्सी
सपनामा बच्चा देखिनु शुभ वा अशुभ, थाहा पाउनुहोस् भविष्यको जानकारी
के गर्दै छन् यी युबतीहरु ? भिडियो बन्यो भाईरल (भिडियो सहित)
आज सुनमा इतिहासकै ठूलो मूल्य ! धेरै सस्तो भयो सुनको मुल्य आज फेरी बढ्यो, हेर्नुहोस तोलाको कति पुग्यो ?